İzmir’de “Dünya Bisiklet Günü” Coşku İçinde Kutlandı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirOsh World Cycling Day "ee ku yaala İzmir ayaa lagu dabaaldegay Enthusiasm
Osh World Cycling Day "ee ku yaala İzmir ayaa lagu dabaaldegay Enthusiasm
04 / 06 / 2018 35 Izmir, tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
3 June, oo loo dabaaldegay sidii Bisiklet World Baaskiilka Haziran, ayaa si xamaasad leh loogu qaatay howlaha ay qabanqaabisay Degmooyinka Izmir Metropolitan. Dadka reer Izmir waxay u bilaabeen inay helaan magaalo waara, waxay bilaabeen safar baaskiil wadid fiican oo udhaxeeya Bostanlı İskele iyo İnciraltı City Forest iyagoo wata riwaayadaha samba iyo kooxda kahadalka ee Bloco Entrudo. Riwaayadda İzmir Big Band ayaa lagu qabtay finalka munaasabada midabada leh oo isu keenta dadka xiiseeya baaskiilka da 'kasta laga bilaabo 7 illaa 70.
Barnaamijka degmada Caasimadda, derbi fuulid la taaban karo oo loogu talagalay carruurta, garoon lagu cayaaro, dharka lagu ciyaaro, sawirka wejiga iyo nashaadaadka qoob-ka-ciyaarka mini iyo cayayaan bilaash ah iyo nacnac suuf ah ayaa la qaybiyey.
12 April N World baaskiil maalinta, oo lagu go'aamiyay qaraarkii Qaramada Midoobay ee 2018, ujeedadiisu tahay in lagu dhiirigeliyo shakhsiyaadka dhaqdhaqaaqa jirka iyo kor u qaadista wacyiga gaadiidka baaskiilka.
Shaqaalaha 14 ayaa ku xayiray dhisme tareen ah oo burburay
Dhagax Taariikhi Taariikha 100. Sannad Damaashaad
Samsun Nidaamka Tareenka Nidaamka 5. Sanadka la xusay
Georgia Railwayway 64. Sannad Hayad Dhisida
Nidaamka tareenka fudud ee ay dhiseyso Gaziantep Dawlada Hoose ee Magaaladda…
Nabadgelyada Gaadiidka iyo Isbuucyada Tababarka ayaa lagu dabaaldegay Manisa
IETT iyo Jaamacadda Cilmi-badeedka ayaa u dabbaal-degay qaddarinta dadka waayeelka ah ee leh hawlo kala duwan
93 ee Dood Cuntada. Sannadgu wuxuu ku dabaaldegay Istanbul oo leh Dhacdooyin kala duwan
Inciralti Urban Forest
Taariikha Tareenka Taariikka ah ee Ankara wuxuu noqonayaa Kulliyad